Nooca Macdanta Heerka baaxadda Meelaha laga helo
Salt Major Minor Afder, Baji DoL, Eldere Dolo Ado, Melka Softer and Kenere in Liban And Afdere zones
Gold Major Haramsam & Hassamta of Moyale area in Liban Zone
Mica Major Shabelle and Carara area.
Feldspar Major Shabelle area, near Bombas and Babile Towns
Natural Gas Major Halala & calub areas in Korahe zone
Graphite Minor Haramsam area in Liban Zone
Kalin Minor Hasamet area in Liban Zone
Magnetite Minor Agal Mountains north of Haramsam
Phosphorus Minor Gumburo 1, Bokh, Degob Villages & Geladin area in Warder Zone
Talc Minor Haramsam in Liban Zone
Construction materials Minor Degahbur , Shinile & korahe Zones
Khayraadka tamarta - Energy Resources
Deegaanka Soomaalida waxa laga helaa ilaha quwadaha kala duwan sida gaaska dabiiciga ah, quwadda tamarta cadceedda, quwadda tamarta dabaysha, iyo nooca loo yaqaan “biomass”.
Dhul-dooxooyinka deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dooxada “Ogaden depression” iyo dooxada Wabi Shebelle River basins” waxay leeyihiin fursad laga dhallin karo quwadda tamarta korontada biyaha laga dhaliyo. Waxa lagu qiyaasay fursadda laga dhallin karo 6974 GWH/Y (kasso noqonaya 3.47% quwadda dalka oo dhan).
Sidoo kale, waxa wabiga Shabelle laga dhalin karaa quwad lagu qiyaasay 738 MW.
Waxa kale oo fursad ka bannan tahay dhalinta quwadda dabeysha. Quwaddan oo ah mid aan wali loo soo jeedsan lagana faa’iidaysan.
Deegaanka Soomaalida waxa ka jira fursadda tamarta laga dhalin karo fallaaraha cadceedda. Waxa la ogaaday in falaaraha cadceedda ee deegaanka Soomaalida ay gaadhayaan qiyaas dhan 5500 ilaa 6000 wh/m2. - Si arrintan loo gaadhana waxa la isticmaalikaraya farsamada loo yaqaan “solar photo-voltaic (Pv) technology”.
Tamarta laga helo dhirta la gubo ayaa hadda deegaanka ka ah isha koowaad ee loo isticmaalayo tamarta wax lagu qabsado.
Dalxiiska - TOURISM RESOURCES
Deegaanka Soomaalida waxa lagu tilmaamaa inuu hodon ku yahay goobo ku habboon dalxiiska sida goobaha dhaqanka, goobo si dabiici ah u leh soo jiidasho gaar ah, iyo goobaha taariikhiga ah.
Goobaha soo jiidashada dalxiiska leh.
Dalxiisku wuxuu kaalin muhiim ah ka gaysan karaa horumarka dhaqaalaha ee deegaanka
Waxa ka dhasha fursado shaqo, dawladda waxa ka soo gala dakhli ama cashuur, waxa ku dhisma inkaaniyaadka horumarka iyo saktarka adeegga .
Meelaha xusidda mudan ee dhinanaca dalxiiska waxa ka mid :
Babile rock valley,
The Karamara mountain,
The desert landscape and vegetation,
Harar-Jigjiga sceni route,
Wildlife and conservation areas, etc.
Meelaha taariikhda ama dhaqanka ee soo jiidashada leh:
Goobta dagaalkii talyaaniga ee Walwaal (Walwal Battle field), goobtan oo taariikhda Itoobiya meel sare kaga jirta waayo waa meel lagu jabiyey gumaysigii Talyaaniga
Waxa jira xabaalo taariikhi ah oo ku yaalla meelaha kala duwan.
Biyaha kulul ee dabiiciga ah - Natural Hot Springs
Isha biyaha kulul ee Erer Gota -
Isha biyaha kulul ee Babile (2 km meel u jirta magaalada) –
Isha biyo kalule ee Arrabi (Degmada dhambal) –
Qasriga boqorkii Xaylesalase ee magaalada Erer – Waxa ku yaalla biyo kulul oo dabiici.
Khayraadka Biyaha - Water Resource
Wabiyada ugu waaweyn ee deegaanka ka jiraa waxay kala yihiin wabi Shebelle, Genale, Dawa iyo Weyb, kuwaasoo sannadka oo dhan leh biyo socda.
Sido kale dooxooyin aad u waaweyn oo waqtiga roobabka biyo socda oo joogto ah leh, waxa ka mid ah Erer, Dakhato iyo Fafen.
Guud ahaanna waxa lagu qiyaasay in biyaha ka dhasha wabiyadaas lagu waraabin karo dhul baaxaddiisu dhan tahay 600,000 ha kaasoo hadda laga isticmaalo 3%.
Waxa xusid mudan in biyaha baaxadda leh ee ka jira deegaanka in laga samayn karo meelo ku habboon cayaaraha kala duwan iyo kalluumaysiga isla markaana dalxiis laga samayn karo.
Wabi Shebelle waa dooxo-fadhiga (basin) ugu weyn dalka Itoobiya. Wuxuu gaadhaa dhul lagu qiyaasay 205,400 km2.. Magaalooyinka ugu waawyn ee dhulkan laga helo waxa ka mid ah Jijiga, Dhagahbur, Kabridahar, Kalafo, Gode, Mustahil, hamaro iyo kuwo kaleba.
Dhinaca bari ee dooxada Ogaden wuxuu ku fadhiyaa dhul lagu qiyaasay 71,900 km2 . Wabiga Genale oo ah isna midd aad u weyn maraka laga reebo Wabiyada Shabelle iyo Abay wuxuuu ku fadhiyaa dhul lagu qiyaasay 168,000 km2. magaalooyinka ugu mihiimsan ee dooxadan laga helo waxa ka mid ah Moyale iyo Filtu iyo kuwo kale oo badan.
Kaluumasigu wuxuu ka mid yahay saktarrada la illaabay. Waxa la xaqiijiyey in wabiyada kala duwan ee degaanka ay ka buuxaan noocyada ugu fiican ee wabiyada laga helo isla markaana wax-soo-saarkoodu le’eg yahay heer la maalgalin karo.